Ukuphuma ngebhayisikile-Izibonelelo ezilungileyo ezisizisela zona | IBezzia
Zonke iintlobo zemidlalo ziya kusifaka kwioksijini kwaye ngenxa yoko, ziya kusishiya sinengqondo ecacileyo kunye nomzimba ophilileyo kwaye ophilileyo. Ke ngoko, akukho nto ifana nayo hamba ngebhayisikile, ongomnye wemidlalo exhaphake kakhulu Kwaye oko kuyakusishiya neenzuzo ezinkulu ekufuneka uyazi ukuba awukenzi njalo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ngoku nemozulu elungileyo ufuna ukuhamba ukhe uhambe, ukuba akushushu kakhulu. Kodwa siya kwenza oku kukhwela ibhayisikile yethu kuba iya kuba ngoyena mlingane wethu. Ungaphoswa yiyo yonke into enokusenzela yona, kuba ayisiyonto incinci leyo.
1 Ukuhamba ngebhayisikile kunciphisa uxinzelelo
2 Uthetha umzimba
3 Uyomeleza intliziyo
4 Uya kuncipha
5 Uya kunciphisa i-cellulite
Ukuhamba ngebhayisikile kunciphisa uxinzelelo
Kukho amaxesha apho, phakathi kwekhaya kunye nomsebenzi kunye nezinye iingxaki, sivelisa uxinzelelo oluninzi. Ke ngamanye amaxesha asazi nokuba singayisusa njani kubomi bethu. Ewe akukho lula ukuthi ndlela-ntle, ke ngomdlalo omncinci mhlawumbi siya kuyityhalela kude nangakumbi. Ukuhamba ngebhayisikile kuyakwenza ukuba ukwazi ukucoca ingqondo yakho ukongeza kwimidlalo ngokwayo. kuba uya kubona iindawo ezintsha, umoya ovulekileyo kwaye oko kuya kukukhokelela ekubeni ungacingi ngazo zonke iingxaki onazo kodwa ujolise kwezona zibaluleke ngokwenene ngeli xesha. Ukuba ufumana okuncinci ngeli vithamini yonke imihla, ngokukhawuleza kunokuba ucinga ukuba uza kuba ngcono.
Kuyinyani ukuba izihlunu esiza kusebenza kuzo ziya kuba zii-quadriceps, ke ngoko, zezokuqala ukuba zenze ithoni. Nangona singenakulibala naloo nto amathole ngokunjalo neempundu ziya zisomelela. Into ekufuneka siyilawulile yindlela elungileyo yokuma ukuze someleze indawo yangasemva. Ukuze indawo ye-lumbar ithathe ezona zibonelelo zilungileyo, ibangela ukuba iintlungu zikude.
Into ekufuneka siyenzile kukuqala kancinci kancinci kwaye sandise ubunzima. Ngale ndlela, umzimba awuhlali umile kwaye sinokubona iziphumo ngokukhawuleza emzimbeni kodwa nakwimpilo yethu. Kule meko, sithetha ngayo yomeleza intliziyoNjengokuhamba ngenyawo, into esiya kuyenza kukumpompa igazi entliziyweni ngendlela ebukhali ngakumbi, eya kuthi yenze umoya uphelele emzimbeni. Apho siya kuyomeleza intliziyo njengoko sifuna.
Njengakuwo nawuphi na umdlalo oxabisa ityuwa yawo, ukunciphisa umzimba yenye yezo meko zenzeka ngokukhawuleza. Kodwa kuyinyani ukuba oku kufuneka singahlali sihamba kunye nokuzilolonga kokutya okuhle. Indawo elungeleleneyo apho siza kubheja kwimifuno, siyakubeka ecaleni ukutya okuphekiweyo okanye okosiweyo, kunye ne-eikeyiki. Kuba kusithiwa ukuba ulandela isingqisho esincinci kwibhayisikile ungaphulukana neekhalori ezingaphezulu kwama-500 ngeyure nganye. Ke, sele isisikhuthazo esihle sokuya emsebenzini.
Uya kunciphisa i-cellulite
Olunye uncedo olubalulekileyo. Kuba baninzi abantu ababona indlela i-cellulite engena ngayo ebomini babo. Ixolo leorenji Ichaphazela ikakhulu indawo yemilenze kunye neempundu, nangona kuyinyani ukuba inokusasazeka nakwezinye iindawo. Ukuphuma ngebhayisikile kuyayinciphisa le ngxaki, kuba imilenze ihamba rhoqo kwaye oku kubangela ukuba kuveliswe umphumo wokuthambisa. Oko kuthetha ukuba akukho mafutha aqokelelweyo emzimbeni. Ukuba ubusele uthanda ukuphuma nebhayisikile, ngoku uya kuyithanda nangakumbi, enkosi ngokwazi ezi zibonelelo uzakuzibona njengesiphumo emzimbeni wakho. Ngaba sele uqhuba ibhayisekile yonke imihla?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukuzivocavoca » Izibonelelo zokuhamba ngebhayisikile
Yintoni i-Buffalo Hump kunye nendlela yokuyiphelisa
Ukubheja kweAmazon Prime kwi-thriller 'kwihlobo elikhohlakeleyo'